Wepamusoro gumi Matipi Ekubudirira Big Data Kuongorora - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Kana zvasvika kune kuongorora kukuru kwedata akati wandei masangano arikushaya data ravo rakakosha. Ivo havanyatso kuziva nezve kurasikirwa uye vari kuita zvikanganiso zvakakura nekuzviita. Zvinoenderana neongororo yakaitwa nemuongorori Forrester Makuru emasangano ari kungoongorora gumi nemaviri muzana (12%) yedata ravo. Varikushaya nzwisiso yakakosha. Aya mazano akakosha aigona kubata hardcore ruzivo iyo ikarasikirwa inogona kukonzera matambudziko mukushanda kwekambani.
Ichi chinhu chinofanirwa kutarisirwa seimwe nzira, zvinogona kuva nenjodzi kukambani. Saka zvakapihwa pazasi mamwe emazano akakosha kuti ubudirire pakuongorora kukuru kwedata.
Unofarira Big Data? Dhawunirodha eBook yedu yemahara:
Matipi Ekubudirira Big Data Kuongorora:
1. Kuchenesa data rese pakutanga kwakakosha.
Iwe unofanirwa kuve wakangwarira mukubata data sezvo iwe uchifanira kudzivirira kukwezva kuti ubatanidze data kubva kwakasiyana masosi pasina kuchenesa iro rapfuura data. Izvi chaizvo zvinotora nguva asi gare gare, zvichakubatsira iwe. Izvo chaizvo zvicharerutsa account kuvandudza, kudonhedza kuomarara kweprojekiti uye kuwedzera mari yakabatana yekuchengetedza mari.
2. Kushanda kwako kunofanirwa kuve nechinangwa chekupedzisira:
Izvo zvakakosha kuti utarise chinangwa chekupedzisira uye nekuti chichava chepamusoro kukosha kusangano. Iwe unofanirwa kuona zvinokosheswa zvebhizinesi sekusimudzira mashandiro, kushanda kwevatengi kana kugadzirisa njodzi. Ongororo yeAnalytics uye mamodheru edhata anogona kuitwa pamberi pezvinodiwa zvehurongwa.
3. Tarisa pane chaiyo mibvunzo uye uvabvunze.
Ruzivo rwakanyanya kukosha mukuita bhizinesi runowanikwa nekufanotungamira kuti ndeapi ruzivo runodiwa uyezve wobvunza iyo data yakatarwa mibvunzo. Akawanda makambani anoshanda ne makuru data mhinduro uye vanoda kupinda mune ruzivo vasina kana kufunga izvo zvavanonyatsoda kuziva. Iyo yekunyepedzera kana isina basa mibvunzo haigamuchire chero mhinduro yakajeka.
4. Iva nematauriro anoita kuti kubatana kuve pamwe chete:
Kuti uwane mhedzisiro yaunoda, zvakakosha kuti ushande pamwe neako akasarudzwa analytics mupi nekuve nekubatanidzwa kwevanokosha vanobata kubva kubhizimusi rako chairo kumberi. Uku kushanda pamwe chete kuchakubatsira iwe kuwana hunyanzvi hunodiwa uye ruzivo izvo iwe zvaunoda chaizvo kuti urambe uine huwandu uye nekuwedzera yako hombe dhata mhinduro mukati meimba kune ramangwana tarisiro.
5. Tarisa zvakanaka usati wanyora:
Izvo zvakakosha kuti ushande nemumwe munhu ari nyanzvi uye mugadziri ane ruzivo sezvo zvichizokubatsira iwe kuumbirisa iyo iriko mishumo mumutsara izvo zviripo mune iyo nyowani analytics system. Semuenzaniso, kana iwe uine zviyero zvematafura tafura uye kuverenga, zvinobatsira kubvisa kusagadzikana kunogona kudhura uye kunotora nguva kusarudza mune ramangwana.
6. Hapana bhajeti yemishumo yakagadziriswa asi inofanirwa kutarisa kuchinjika:
Kuwanda kwemasangano vanoita chikanganiso chekuwedzeredza huwandu hwemishumo yavanoda sechikamu chemhinduro yavo nyowani ye analytics. Izvi zvinogona kunyatso kudhura kana zvasvika kune wechitatu-bato fizi yekuvandudza. Saka zvinodhura chaizvo kugadzirisa bhajeti yekuvandudza 'yega-sevhisi' mhinduro iyo inobvumidza vashandisi kuvaka yavo mishumo sekuda kuri kuita.
7. Iyo yakasarudzika dashibhodhi inofanira kuiswa pamberi.
Iwo mamaneja makuru anofanirwa kupihwa mushandisi-inoshamwaridzika interface ine chaiyo ruzivo sezvazvinogona sezvazviri sekiyi iyo inova nechokwadi chekuti system inoshandiswa zvakanyanya. Paunenge uchinge watenga-mukati kubva kuboka revatungamiriri, chichava chisungo kune iro rese bhizinesi kutevedzera.
8. Kuti uwane zvirinani kudzoka usability inofanira kutariswa:
Kuburitsa mishumo chaiyo munhu anofanirwa kuona mhinduro iri nyore kufamba uyezve ichavandudza kuita sarudzo. Kana hunyanzvi hwekuronga hwepamberi uye hunotarisirwa kubvunza mhinduro ichaiswa padivi. Endai Kushanda nevadyidzani vanogona kutsvaga mhinduro dzavakagadzira uye dzinogona kuwanikwa nevasiri-tekinoroji vashandisi.
9. Iva nehungwaru uye ita mari muhunyanzvi kwete chete mune mhinduro.
Kuti uwane budiriro kukambani yako kudzidziswa kwevashandi zvakakosha. Kugamuchira kudzoka nekukurumidza pa inivhesitimendi Zvakakosha kushongedza timu kubva pazuva rekutanga nehunyanzvi hwavanoda kushandisa sisitimu zvakatsetseka. Izvo zvinobatsira kuchengetedza hombe kubvunza uye kusimudzira fizi yebasa inogona kupedzwa mukati mekambani.
10: Mhedzisiro inogona kugadziridzwa haifanire kutarisirwa pasi:
Kuwedzeredzwa kwenzvimbo dzemazuva ano dzekudzosa hofisi kwakatoderedza nguva yekuunganidza ruzivo kubva kwakasiyana masosi uye ichi ndicho chinhu chakakosha chinofambisa business intelligence kushuma. Ino nguva iyo yakaderedzwa kutora iyo inodiwa ruzivo kumishumo inonyatsotsigira nekukurumidza kuita sarudzo kune iyo kambani iri chaizvo yakakura basa ..
Saka aya ndiwo mamwe emazano akakosha kuti ubudirire pakuongorora kukuru kwedata. Kana iwe uchitsvaga Developers kukura a big data mhinduro ipapo iwe uri panzvimbo chaiyo. Isu tine timu yemasayendisiti ane ruzivo data anogona kutora iri basa. Bata nhasi.